किन गरिन्छ कम्प्युटर रिफ्रेस ? कतै भ्रममा त हुनुहुन्न ? | CHALKHEL.COM
Home मुख्य समाचार किन गरिन्छ कम्प्युटर रिफ्रेस ? कतै भ्रममा त हुनुहुन्न ?
किन गरिन्छ कम्प्युटर रिफ्रेस ? कतै भ्रममा त हुनुहुन्न ?
अधिकंश कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरु बारम्बार computer वा laptop रिफ्रेस गरिरहन्छन् । Desktop मा right click गरेपछि खुल्ने dialog box को रिफ्रेस option मा click गरेर वा सिधै keyboard मा रहेको F5 बटन थिचेर पनि रिफ्रेस गर्न सकिन्छ । सायद तपाई पनि आफ्नो कम्प्युटर वा laptop बारम्बार रिफ्रेस गरिरहनुहुन्छहोला । तर के सोचेर refresh गर्नुहुन्छ ?
धेरैजसो प्रयोगकर्ताहरु चाहीं कम्प्युटर फास्ट हुन्छ, मेमोरी space release हुन्छ, hang हुदैन, Operating सिस्टम ले छिटो काम गर्छ भनेर कम्प्युटरलाई रिफ्रेस गर्नेगरेको बताउछन् । तर यो सत्यता होइन, सत्यता त के हो भने रिफ्रेस गर्दा माथि उल्लेख गरियको कुनै पनि काम हुदैन । यदि तपाईहरु आजसम्म पनि त्यै सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने त्यो तपाइको भ्रम मात्रै हो ।
यसो भनिरहदा तपाईहरुलाई लग्न सक्छ कि “त्यसोभए यो Refresh को काम क हो त ?” सत्यतालाई नियाल्ने हो भने यो refesh को काम desktop मा रहेका Icon हरुमा हलचल पैदा गराउनु मात्रै हो । Microsoft कर्पोरेशन ले desktop मा रहेका icon हरुलाई रिडिस्प्ले (re-display) गर्नका लागि मात्रै यो ‘refesh’ बटन को निर्माण गरेको हो । यसका अलाबा कम्प्युटर फास्ट बनाउन, मेमोरी space बढाउन आदि इत्यादि काम गर्न यसको कुनै भूमिका रहदैन । जुनसुकै बेलापनी कम्प्युटर रिफ्रेस गरीरहनु भनेको अज्ञानता सिवाय अरू केही पनि होइन ।
-सौगात नेपाल ‘अतित’
(Student of computer engineering)
Previous articleनुवाकोटको दुइपिपलमा कराते डोजो लोकप्रिय बन्दै
Next articleबाली संरक्षण गर्न बीउ बैंक